Fiarahamonim-pirenena : Tsy nahomby amin’ny andraikitra sahaniny -
AccueilRaharaham-pirenenaFiarahamonim-pirenena : Tsy nahomby amin’ny andraikitra sahaniny
26/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mamita-bahoaka. Izay no azo ilazana ny fiarahamonim-pirenena ankehitriny. Hifarana ihany mantsy ity ny taona 2017, tsy hita mivaingana izay zava-bitan’ireo atao hoe “Fiarahamonim-pirenena”. Raha ny marina mantsy, dia rafitra iray natao hitaiza ny vahoaka ao anatin’ny fahatoniana sy mitaiza amin’ny alalan’ny fanomezam-baovao mari-pototra ho an’ny vahoaka. Anisan’ny andraikitra sahaniny eto amin’ny firenena ihany koa ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta sy ireo rafi-panjakana misy eto amin’ny firenena.
Ny mifanohitra amin’izay anefa no ataon’izy ireo. Mbola tsy nisy na nahenoana, na dia hetsika iray aza nataon’ny fiarahamonim-pirenena tamin’ity taona 2017 ity. Nampisongadina azy ireo kosa ny fanakianana etsy sy eroa ny governemanta izay manatanteraka ny asany an-tsakany sy an-davany.
Raha zohina, dia tsy manao afa-tsy fanakianana ranoray mahakasika ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena nandritra ny taona. Izany tokoa ve no tadiavina sy andrasan’ny vahoaka amin’izy ireo? Tsia, diso ny fihevitr’izy ireo ny amin’ny tokony hanatanterahany ny asany izay andrasan’ny vahoaka amin’izy ireo. Mbola tsy nisy na dia tatitra ny zava-bita nataon’izy ireo nandritra ny taona fa lohalaharana kosa amin’ny tsikera sy fanakianana. Mitsekira nefa tsy mitondra vahaolana akory hanasoavana sy hampandrosoana ny firenena sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka ny Fiarahamonim-pirenena.
Mihevitra angamba ny Fiarahamonim-pirenena fa antoko politika, ka afaka miditra lalina amin’ny fiainan’ireo antoko, indrindra fa ny fitantanana ny firenena. Raha ny marina, tsy tafiditra amin’ny andraikitra sahanin’izy ireo velively ny fitsikerana sy fanakianana ny Fitondram-panjakana.
Ankoatra izay, efa nampitandrina azy ireo ihany koa mantsy ny mpitondra tenin’ny governemanta amin’ny fanakianana sy fitsikerana ny governemanta, satria tsy andraikitr’izy ireo velively izany. Ny manara-maso ny fandehan’ny raharaha eny anivon’ireo minisitera sy andrim-panjakana isan-tokony, ary manao tatitra ny asa amin’izany fanaraha-maso izany no tokony ifotoran’izy ireo.
Fehiny, azo lazaina ho mamita-bahoaka ny fiarahamonim-pirenena satria tsy mitondra izay mba andrasan’ny vahoaka aminy akory izy ireo. Tsy ny vahoaka ihany anefa no tratran’izany fa eo koa ireo mpamatsy vola, sns.
Tsy baranahiny. Miisa efatra ireo fangatahana izay voarain’ny prefektioran’ny polisy mangataka ny hanatanterahana hetsika ny faha 13 Mey ho avy izao. Eo ny etsy amin’ny kianjan’ny kanto, ny an’ny maître Olala etsy Andohalo, ny an’i ...Tohiny